Imisebenzi nezinhlobo zokuphakamisa isiguli | I-JBH Medical
Umsebenzi wokuphakanyiswa kweziguli ezikhubazekile:
Ukuhambisa abantu abanokuhamba okungahambi kahle besuka kwesinye isikhundla baye kwesinye kungaphakamisa isiguli sisuke emhlabathini siye embhedeni; izinyawo ze-chassis zingavulwa ukuze zisondele esigulini; isondo langemuva linebhuleki elingabhuleka ukuvimbela ukuphakamisa isiguli lapho isiguli siphakamiswa Hambisa futhi ubangele ukulimala okungachazeki kubasebenzi babahlengikazi noma ezigulini. Iringi yokuphakamisa ingazungeziswa i-360 °, engahambisa kalula isiguli ukusuka kwenye indawo iye kwenye. Indwayimane ekhethekile ingalungisa ukuma, futhi izinsimbi ezinemibala ehlukene emazingeni amaningi zilungele umsebenzisi ukulungisa ukuma. Umsebenzi wokumisa okuphuthumayo ungasetshenziswa ukunqamula amandla ngesikhathi esibalulekile ukuvikela ukuphepha kwabasebenzisi namalungu omndeni. Ingahlukaniswa kalula futhi ngokushesha futhi isongwe ukuze ithwalwe kalula.
Amakheshi eselula ohlobo lokuhamba asetshenziswa kakhulu ezikhungweni zobungcweti noma ezibhedlela. Zisetshenziselwa ukuhambisa izinto ezinjengezihlalo namalula okuhlala kuwo into ehambayo noma ilele kulift.
I-lift yezitebhisi ezihambayo isetshenziselwa ukusiza abantu abangafaneleki ukwehla benyuka izitebhisi, kepha into ehambayo iyodwa ayinakwenziwa ngokuzimela. Othile kufanele asize ukuqinisekisa ukuphepha.
Amakheshi alungisiwe ngokuvamile abekwa phansi eceleni kombhede, futhi kunezinsika ezifakiwe emakhoneni amane egumbi, ezifakwe amasilingi okwenza izinto ezihambayo zihambe ngaphakathi kwebanga elihambayo lomkhondo.
Ukuphakanyiswa kwesitimela ukuphakamisa okuhambisa into ehambayo kulitshe ngendwayimane eceleni kwesitimela efakwe ophahleni. Okubi ukuthi ukufakwa kwethrekhi kudinga ukwakhiwa, futhi uma sekufakiwe, indawo yethrekhi ayinakuguqulwa, futhi nokutshalwa kwemali kukhulu, ngakho-ke kufanele kukhethwe ngokucophelela.
Indwayimane iyingxenye edingekayo yokuphakanyiswa kukagesi. Ingahlukaniswa ngohlobo lwendwayimane, uhlobo olugoqiwe, uhlobo lomlenze oluhlukanisiwe (olugoqwe ngokugcwele, olugoqwe isigamu), uhlobo lwendlu yangasese, njll.
Abantu asebekhulile abagula kakhulu, abakhubazekile amalungu omzimba, abazi lutho noma abaphazamisekile emisebenzini yabantu asebekhulile, noma ngabe balele ekhaya, ekhaya lasebekhulile, noma esibhedlela, ukunakekelwa kokugeza, ukunakekelwa kokuhlanjululwa kwezinga elithile, kanye nekhwalithi yempilo kuyinkinga enkulu. Kulezi ziguli noma asebekhulile, isikhumba somzimba wonke singahlanzwa kuphela ngokukhuhla. Onakekela isibhedlela noma izihlobo ekhaya bangabamba umcengezi noma ibhakede lamanzi afudumele, bawumanzise ngethawula, bese bekhuhla. Ngenxa yokuthi kuyinto engeyinhle ukusebenzisa okokugeza okufana nensipho nokugeza umzimba ngesikhathi sokukhuhla, ukukhuhla akukona ukuhlanzeka nokuphelela. Ikakhulukazi nge-orthral orifice ne-anus, ukuhlanzeka kokukhuhla kukhawulelwe kakhulu. Umuzwa wokukhuhla nawo mubi kakhulu kunokugeza. Ngenhlanhla, lezi ziguli noma asebekhulile abasakwazi ukuveza imizwa yabo. Kulezi ziguli noma asebekhulile abalele embhedeni isikhathi eside futhi abangakwazi ukuzinakekela, akukubi ukuthola umuntu ozosiza ukukhuhla njalo. . Ngakho-ke, lezi ziguli noma asebekhulile bahlala bephethe iphunga elingathandeki, izehlakalo zokutheleleka ngomgudu womchamo nezilonda zombhede ziphakeme impela, futhi nezinga lempilo liphansi kakhulu.
Lolu hlobo lokuphakamisa lungasetshenziswa ezikhungweni zasekhaya nezokwelapha. Ngemuva kokuthi i-R & D nokukhiqizwa sekuqalile ukusetshenziswa emakethe, ngokushesha iheha ukunakwa nokuqashelwa kwawo wonke umuntu, ngoba ilifti ixazulula inkinga enkulu yeziguli ezilele embhedeni, ethandwa yiziguli nabahlengikazi asebekhulile. Ngosizo lwalolu hlobo lokuphakamisa, asebekhulile noma abagulayo bangageza nsuku zonke, banciphise izifo zesikhumba kanye nomchamo weziguli ezilele embhedeni nasebekhulile, kuqeda iphunga eliyingqayizivele emzimbeni. Noma uhlala embhedeni isikhathi eside, ungaqhubeka nokujabulela injabulo yokugeza. Gcina umzimba wonke uhlanzekile futhi womile, uthuthukisa kakhulu izinga lempilo yabantu abadala kanye neziguli ezinemisebenzi engathandeki.
umbhede wesibhedlela othomathikhi ngokuphelele, umbhede wesibhedlela esinamandla, ezilahlwayo kwezokwelapha, imaski yomlomo wobuso, recliner embhedeni iziguli, imibhede yokunakekelwa okunamandla,
ezilahlwayo kwezokwelapha, umbhede wesibhedlela othomathikhi ngokuphelele, imaski yomlomo wobuso, umbhede wesibhedlela esinamandla, imibhede yokunakekelwa okunamandla, recliner embhedeni iziguli,